Vietnam Visa for Zimbabwe Citizens: Requirements + Fees
Yes. Zimbabwe passport holders are REQUIRED to get a valid visa to enter Vietnam for both tourism and business purposes. The table below shows a summary of Vietnam visa requirements for Zimbabwean citizens:
The Zimbabwe passport is valid for at least 06 months following the arrival date; and
The Zimbabwean passport has at least 02 blank pages.
How to Apply for Vietnam Visa for Zimbabwe Citizens?
There are currently two ways to get a visa to Vietnam for citizens and passport holders of Zimbabwe, consisting of:
Zimbabwean passport holders can get a visa at Vietnam embassy in Zimbabwe or any embassy/consulate of Vietnam in other countries where they are residing or traveling.
To get the visa in this way, Zimbabwe citizens need to submit:
The best way to get a visa for visitors from Zimbabwe (including Zimbabwean citizens and passport holders) who are traveling to Vietnam by air is to get Visa on Arrival (VOA).
To get the letter, please send a soft copy of your Zimbabwean passport to our email Support@Vietnam-visa.com or send your request below. Our staff will get back to you soon with further assistance.
Vietnam Visa Fees for Citizens of Zimbabwe
This section answers the question: “How much is a Vietnam visa for Zimbabwe citizens?”
For visa on arrival, Zimbabwean nationals need to pay two types of fees to get a full visa at the airport, consisting of: